पैसा कमाउने आइडिया : प्रयोग गरिएको मोजा बेचेर मासिक लाखौं कमाउँछन् यी व्यक्ति ! | Seto Khabar
२०७९ बैशाख २४, शनिबार (१ हफ्ता अघि)
काठमाडौँ । संसारको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको प्रति व्यक्ति आय हो। अर्थात हरेक व्यक्तिले जीवन जिउनको लागी आवश्यक पर्नै रकम कमाउन सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा मानिसले कमाइ बढाउन, धेरै सीप सिक्नका लागि धेरै किसिमका काम गर्छन् । तर तपाईंले लगाउने मोजा बेचेर पनि लाखौं कमाउन सकिन्छ भन्यौं भने सायद तपाईं पत्याउनु हुदैन होला। तर यो कुरा साँचो हो, एक जना मानिसले आफ्नो प्रयोग गरिएको मोजा अनलाइनमा राखेर प्रति महिना १,६०० पाउण्ड अर्थात् २ लाख त्रिचालीस हजार नेपाली रुपैयाँसम्म कमाइरहेका छन्।
मोजा किन बेचिन्छ ?
लण्डनका २५, बिली–जो ग्रे, आफ्नो मोजाको बारेमा पागल मान्छे हो। उनी आफ्नो मोजाको तस्वीर सोशल मीडिया राख्छन र बोली लगाउछन् । बिक्रीको कुरा गर्दा मोजाको गन्ध राम्रो हुने भएकाले विक्रि पनि राम्रो भएको उनको भनाई छ ।
मोजा मात्र होइन, मानिसहरूले भित्री लुगा पनि किन्छन्
बिली–जो ग्रे भन्छन्, प्रयोग गरिने मोजा र भित्री लुगाको बजार छ भन्ने कुरा मलाई थाह थिएन। तर मानिसहरूले तिनको हुने वाला श्रीमती चल्ने ओन्लेफान्स पेजको माध्यमबाट उहाँलाई सम्पर्क गर्न थाले । तब तिनले यो कुरा बुझे।
एक जोर मोजाको मूल्य एकदमै धेरै हुन्छ
उक्त २५ वर्षीय युवकले आफूले प्रयोग गरेको सामान १० पाउन्ड अर्थात १५ सय रुपैयाँ देखि ३० पाउन्ड अर्थात ४ हजार ५ सय प्रति जोडी र हप्तामा पाँचदेखि १२ जोडीसम्म बिक्री गर्ने गरेको बताएका छन्।
धेरै दिनसम्म मोजा लगाउनुहोस्।
ग्रे ले जीप लक ब्यागमा मोजा राखेर पोस्ट गर्नुअघि केही दिनसम्म मोजा लगाएको कुरा लाड बाइबललाई बताए। त्यति मात्र होइन, अझ बढी पैसा कमाउन उसले आफ्नो शरीरबाट धेरै पसिना मोजामा राख्ने गरेका समेत छन् ।
आफ्नो सामान किन्ने मानिसहरुको बारेमा कुरा गर्दै उनले भने, ‘मलाई LGBTQ+ समुदायको अत्याधिक सहयोग भएकाले यसमा धेरै मानिसहरुको चासो थियो । तिनीहरू मेरा विशेष दर्शकहरू जस्तै छन्। तिनीहरूले मेरो पेजलाई सहयोग गर्छन् र म उनीहरूका लागि मेरो वेबसाइटका साथसाथै टिकटक र इन्स्टाग्राम मार्फत भिडियोहरू दिन्छु।’
ग्राहकहरूका लागि जिममा पसिना निकाल्नुहोस्
‘मेरो धेरै अमेरिकीहरू छन् जसले मेरो प्रयोग गरिएको भित्री लुगा र मेरो प्रयोग गरिएको मोजा किन्छन् र उनीहरूले आफनो आनन्दको लागि राख्छन्। म सधैं प्रयोग गरिने मोजा किन्ने नियमित व्यक्तिहरू भेट्टाउँछु। म उनीहरूका लागि दिनमा जिम जान्छु र एक–तीन दिनसम्म लगाउँछु । ताकी मेरो पसिनाको गन्ध तिनीहरूभित्र राम्ररी छिर्न सकोस्। त्यसपछि हामी मूल्यबारे कुरा गर्छौं र तिनीहरू कति पैसा तिर्न खुसी छन् भन्ने कुरा जान्दछौं। तिनीहरूले कति पैसा तिर्छन् भन्ने कुरा व्यक्तिगत तवरमा हो’ बिली–जो ग्रेले भन्छन् ।
प्रेम प्रकट गर्न किन दिइन्छ रातै गुलाफ ?